Xa abafundi befaka isicelo kwisikolo sabucala, kudla ngokuba nenjongo ekugqibeleni yokufikelela kwikholejini eliphezulu. Kodwa njani isikolo sabucala ukuba sikulungiselele ngqo kwiikholeji?
Izikolo ezizimeleyo zinikela ngeeMfundo eziZodwa
Umbutho weZikolo zeBhodi (TABS) uphando malunga nendlela abafundi abalungiselelwe ngayo kwiikholeji. Xa bebuzwa, abafundi abaye kwiikolo zebhodi kunye nabafihliweyo bachaza ukuba bazimisele ngakumbi kwiikholeji kwizifundo ezingekho kwimfundo kunezo eziya esikolweni sikawonkewonke .
Abafundi besikolo sabangasese nabo banakho amathuba okufumana i-degree ephakamileyo, nabafundi besikolo bebhodi beza kunye nepesenti eziphezulu zamadriji aphezulu. Kutheni oku? Esinye isizathu kukuba izikolo ezizimeleyo zenzelwe ukunceda abafundi bahlakulele uthando lokufunda, oko kuthetha ukuba banakho amathuba okuqhubeka nokufunda kwabo ngaphandle kweekholeji eziphakamileyo.
2. Izikolo ezizimeleyo zinamandla
Akuqhelekanga ukuva isikolo samabanga afihliweyo esivela kunyaka wabo wokuqala kwikolishi esithi kube lula kunesikolo esiphakeme. Izikolo ezizimeleyo ziqine, kwaye zifuna abafundi abaninzi. Ezi ziphumo eziphezulu zibangelwa abafundi abaphuhlisa ukuziphatha okusemgangathweni emsebenzini kunye nolawulo lwexesha. Izikolo ezizimeleyo zifuna ukuba abafundi bathathe inxaxheba kwimisebenzi emibini okanye emithathu yezemidlalo kunye nasemva kokufunda, ngelixa bekwazisa amaqela kunye nemisebenzi, ngaphezu kwezifundo zabo.
Ishedyuli esinzima ithetha izakhono zolawulo lwexesha kunye nomsebenzi wesikolo / ubhalansi bomi zizakhono abafundi abazenzayo phambi kwikholeji.
3. Abafundi beZikolo zeBhodi bafunde ukuzimela
Abafundi abaya esikolweni sokubhankwa bafumana ukubhekiseleka ngakumbi kokuphila kwikholeji, ngaphezu kokufunda esikolweni esikolweni. Ngoba?
Ngenxa yokuba abafundi besikolo abahlala ebholeni kwi-campus, endaweni yokuhlala ekhaya kunye neentsapho zabo, bafunda oko kuthanda ukuhlala ngokuzimeleyo, kodwa kwimeko engaphezulu kunokuba ungayifumana kwikholejini. Abazali be-Dorm esikolweni bebhodi badlala indima ebalulekileyo kwimpilo yabafundi bebhodi ebantwini, banikeze izikhokelo kunye nokukhuthaza ukuzimela njengoko befunda ukuhlala bodwa. Ukusuka kwimpahla yokuhlamba kunye nokuhlanza kwendawo ekuvukeni ngexesha kunye nokulinganisa umsebenzi kunye nobomi bezenhlalakahle, isikolo sokubhankanya abafundi sinzima abafundi ukuba benze izigqibo ezinoxanduva.
4. Izikolo ezizimeleyo zihlukeneyo
Izikolo ezizimeleyo zibonelela ngokungafani kwezikolo zikarhulumente, njengoko ezi ziko zihlala zibhalisa abafundi abavela kwidolophu enye. Izikolo zebhodi zihamba ngakumbi, zamkela abafundi behlabathi lonke. Njengoko iikholeji, iimeko ezihlukeneyo zivame ukubonelela ngamava acebileyo, njengoko abafundi bephila kwaye bafunda nabantu bevela kuzo zonke iindlela zokuphila. Ezi ngcamango ezahlukahlukeneyo kwiziganeko zangoku, iindlela zokuphila, kunye neenkcukacha zenkcubeko ye-pop zingakwandisa iklasi yokufundela kunye nokwandisa ukuqonda kwehlabathi.
5. Izikolo ezizimeleyo zineeTitshala eziPhakamileyo
Uphononongo lwe-TABS lubonisa ukuba abafundi besikolo sokubhoda banakho ukuvakalisa ukuba ngabafundisi bezakhono eziphakamileyo kunezikolo ezizimeleyo okanye zikarhulumente.
Kwesikolo esikolweni, ootitshala baninzi kakhulu kunotitshala kuphela. Bahlala bebaqeqeshi, abazali be-dorm, abacebisi, kunye neenkqubo zokuxhasa. Kuqhelekileyo kubafundi besikolo sokubamba ukuhlala bedibanisa nootitshala babo emva kwexesha lokugqiba. Ootitshala bezikolo ezizimeleyo awanalo nje ukufundisa izatifikethi, eqinisweni, izikolo ezininzi ezizimeleyo zixabisa amava malunga nesitifiketi sokufundisa. Ootitshala bezikolo ezizimeleyo bavame ukuba needriki eziphambili kwiindawo zabo zezifundo, kwaye kaninzi banemvelaphi enzulu yobungcali kwizifundo zabo zokufundisa. Khawucinge nje nge-physics yokufunda kwi-injini yangempela, okanye uqeqeshwe ngumdlali wangaphambili weengcali? Izikolo ezizimeleyo zizama ukuqesha okulungileyo kwi shishini, kwaye abafundi bazuza kakhulu.
6. Izikolo ezizimeleyo zibonelela ngengqalelo
Uninzi lwezikolo ezizimeleyo ziqhayisa ubukhulu beeklasi.
Kwizikolo ezizimeleyo, ubukhulu bomgangatho weklasi kaninzi buphakathi kwabafundi abali-12 no-15, ngelixa iingxelo ze-imeyile eziqhelekileyo zifunda ukusuka kuma-17-26 abafundi, kuxhomekeke kumgangatho webanga kunye nohlobo lweklasi. Ezi zincinci zamanani eklasi, ngamanye amaxesha zinomfundisi ongaphezu kweyodwa, ngokukodwa kwiiprogram zontanga kunye neeprogram zezikolo eziprayimari, zithetha ingqalelo yabanye abafundi, akukho mqolo ongemuva, kwaye akukho nethuba lokunganakwa kwiingxoxo. Ootitshala bezikolo ezizimeleyo nabo kulindeleke ukuba bafumane ngaphandle kwexesha eliqhelekileyo lokufunda ngoncedo olongezelelweyo, ngokukodwa kwizikolo zokuhamba. Indawo exhasa inkxaso kubonisa ukuba abafundi bafumana amathuba angakumbi okuphumelela.
7. Izikolo ezizimeleyo Siza abafundi baFake kwiKholeji
Enye inzuzo yesikolo sebhodi , ngokukodwa xa kuziwa ekulungiseleleni iikholeji, ngabafundi abancedisayo, nabazali babo, bafumana kwinkqubo yesicelo sekholeji. Iiofisi zokuCetyiswa kweKholeji zisebenza kunye nabafundi kunye neentsapho zabo ukukunceda ukufumana iikholeji ezifanelekileyo nakwiiyunivesithi. Njengabantwana, kwaye ngamanye amaxesha njengabantu abatsha okanye ama-sophomores, abafundi baqala ukusebenza kunye nabacebisi beekholeji abaqeqeshekileyo abancedisayo ekuqhubeni inkqubo yeekholeji. Ukususela ekuboneleleni ngoncedo kwiikholeji zophando kunye neeyunivesithi ukuphonononga uncedo lwezemali kunye neengxowa-mali, abacebisi beekholeji basebenze ukunceda abafundi bafumane izikolo eziya kubancedisa. Iikholeji ezingaphezulu kwama-5,000 kunye neeyunivesithi eUnited States, iinkonzo zokucebisa iikholeji zingabaxabisa abafundi kunye neentsapho zabo.
Uncedo ekufumaneni iikholeji elungileyo akuthethi nje ukufumana isikolo esinikela esona sikhulu, mhlawumbi. Izikolo ezizimeleyo nazo zinceda abafundi bahlawulele ngamandla abo ngexesha lokungeniswa kweekholejini. Abacebisi beeKholeji banokunceda abafundi bachonge izikolo ezijolise kwiiprogram zezemidlalo okanye zezobugcisa, ezinokuba luncedo xa i-scholarships ikhona. Ngokomzekelo, umfundi othemba ukuba ekugqibeleni aphishekele i-MBA angakhetha ikholeji esinesikolo esomeleleyo seshishini. Kodwa, loo mfundi ofanayo naye unokuba ngumdlali webhola lebhola ekhatywayo, kwaye ngoko ke ukufumana ikholeji kunye nenkqubo ebalulekileyo yoshishino kunye neprogram yebhola ekhatywayo inokuba luncedo olukhulu. Abaqeqeshi besikolo bahlala bebandakanyeka ekuncediseni abadlali bezemidlalo ukuba babonwe ngabaqeqeshi abaphezulu bekholeji, oku kunokubangela ukuba abafundi bezemidlalo badlale kwiqela lezemidlalo. Ikholeji iyabiza, kwaye yonke inkxaso yenkxaso yezemali inokuba luncedo olukhulu ekukhuliseni izigulana zemali-mboleko yomfundi.
Imbali yeCraft Treasury
Jonga ixesha loLawulo lweGuns e-United States